नेपाली मूलका डा. कैनी छानिए बेलायती संसदीय चुनावका उम्मेदवार « Khasokhas Follow @khasokhasmag
सन् २००५ मा युके आएका डा. बच्चुकैलाश कैनी युकेको अर्को महिना हुने संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार छानिएको बेलायतबाट प्रकाशित हुने चर्चित नेपाली अनलाइन बीनेपाली डटकमले जनाएको छ । जुन ८ मा हुने संसदीय चुनावमा डा। कैनीलाई डार्टफोर्ड निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबोर पार्टीले उम्मेदवार बनाउने भएको हो ।
शुरुमा सो क्षेत्रबाट पार्टीले अर्की काउन्सिलर तथा काउन्सिलमा लेबोर पार्टीकी डेपुटी लिडर डेइजी पेजलाई छनौट गरे पनि पेजले आफ्नो नाम फिर्ता गरेपछि कैनीलाई पार्टीले उम्मेदवार चयन गरेको बताइएको छ । ‘न्याशनल काउन्सिलले फोनमार्फत मेरो नाममा निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ’ कैनीले भने ।
तनहुँको कमलाबारीमा जन्मनु भएका डा। कैनी अहिले क्विन एलिजाबेथ अस्पताल, लन्डनमा बरिष्ठ ब्यबस्थापकको रुपमा समेत कार्यरत हुनुहुन्छ । बेलायतमा नेपाली समुदायबीच चिरपरिचित र सक्रिय डा. कैनी समसामयिक विषयमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेख रचनाका साथै कथा र कविता पनि लेख्नुहुन्छ । उहाँका पिता स्व। मेघनाथ कैनी तनहुँका नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाईमा धेरै पटक र धेरै वर्ष जेलमा समेत पर्नु भएको थियो ।